रक्तचन्दनको कारोबार बन्द भएन ! – ejhajhalko.com
रक्तचन्दनको कारोबार बन्द भएन !
१४ माघ २०७४, आईतवार ११:१८ 286 पटक हेरिएको
बनेपा । बहुचर्चित रक्तचन्दनको नाम आजकल सुन्न छाडेपनि अहिले पनि आम जनतामा जिज्ञासा छ, यसको अवैध कारोबार बन्द भएको हो त ? रक्तचन्दनबारे स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको आ–आफ्नै तर्क छ ।
ओलीले राष्ट्रपति कहाँ पठाएको त्यो प्रस्ताव, ‘महाभूल’ नगर्न प्रचण्डको चेतावनी 882 views